Kumbuyuutarrada Ac Ac, Gawaarida Ac Ac, Qaboojiye Hawada Baabuurka - Hollysen
Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd. waa hoosaad ka mid ah Changzhou Kangpurui Automotive Air Conditioner Co., Ltd. Waa warshado cilmi-baaris iyo horumarin xirfadeed leh, soo-saarka iyo iibinta kombiyuutarrada hawo-qaboojiyaha baabuurta iyo qaboojiyaha hawo dhigashada. Warshadeena waxay ku taalaa Niutang Industrial Park, Degmada Wujin, Magaalada Changzhou, Gobolka Jiangsu, waxay ku taal bartamaha Yangtze River Delta, oo ku dhegan Shanghai-Nanjing Expressway iyo Yanjiang Expressway, oo leh gaadiid ku habboon iyo muuqaal qurux badan.
15 sano oo waayo -aragnimo ah
In ka badan 150 badeeco
KOOXAHA MACLUUMAADKA CUSUB EE AUTO CUSUB Badeecadeennu waxay leedahay cabbir aad u yar, buuq aad u hooseeya oo shaqeynaya, nolol shaqo oo ku habboon oo muddo dheer ah, wax -ku -oolnimo wanaagsan oo wax ku oolnimada qaboojinta. Tilmaanta ugu muhiimsan ayaa ah mid aad uga qiimo badan marka la barbardhigo qiimaha wanaagsan. Waxaan hubin karnaa kombuyuutarrada, waxaad ka iibsan doontaa shirkadeena ma aha oo kaliya sheyga laftiisa, laakiin sidoo kale qorshaha dayactirka iyo mashruuca adeegga farsamada. Dhammaan hagaha rakibidda iyo buug -gacmeedka adeegga waxaa raaci doona kombiyuutarradayada. Nooca Qaybta: A/C Compre ...
KOOXAHA CUSUB AUTO AC COMPRESSOR Rotary vane compressor, oo sidoo kale loo yaqaan kombaresarada xoqan, oo ah nooc kombaresarada Rotary ah. Silsiladda qalabka kombiyuutarka ee rookaha ah waxay leedahay laba nooc: wareeg iyo oval. Kursiga roogga wareega oo leh dhululubo wareegsan, masaafada ka baxsan xarunta dhidibka ugu weyn ee rotor-ka iyo bartamaha dhululubada ayaa ka dhigaysa rotor-ka meel u dhow meesha laga soo galo hawada iyo soo-baxa dusha sare ee dhululubka. Qalabka kombiyuutarka ee wareega oo leh dhululubo oval, dhidibka ugu weyn ee ...
Marka laga reebo cutubyo hawo qaboojiyaha baabuurta oo madax-bannaan oo ballaaran, kombiyuutarrada hawo-qaboojiyaha baabuurta ee guud waxay ku xiran yihiin usha ugu weyn ee mishiinka iyada oo loo marayo qabsashada elektromagnetiga. Joogsiga iyo bilowga kombaresarada waxaa lagu go'aamiyaa jiidista iyo sii deynta xajinta elektromagnetka. Sidaa darteed, xajinta elektromagneticku waa qayb fulin ah oo ku jirta nidaamka kontoroolka tooska ah ee hawo-qaboojiyaha baabuurta. Waxaa saameeya bedelka heerkulka (heerkulbeegga), pres ...
KOOWAAD CUSUB AUTO AC COMPRESSOR kombaresarada hawo qaboojiyaha baabuurtu waa “wadnaha” nidaamka qaboojinta baabuurta. Marka nidaamka qaboojiyaha baabuurka la shido, kombiyuutarku wuxuu dhaqaajiyaa ficilka, cadaadinta iyo kaxaynta qaboojiyaha iyada oo loo marayo nidaamka qaboojiyaha ee xiran. Qaboojiyaha wuxuu ku nuugaa kuleylka baabuurka dhexdiisa isdhaafsiga kuleylka ee uumiyaha, wuxuuna ku faafi karaa kuleylka bannaanka gaariga iyada oo mareysa haamaha, si loo yareeyo heerkulka ...
Sleepe Baabuurka Universal ...
PARAMETERS -KA WAX SOO SAARKA Gaadhiga Nooca Qaybta ...
Daaqada Hawada Hawada Cusub ...
Qaboojiyaha hawo dhigashada, waddooyinka taageera, baabuurta ...
12v 24v Univeable Portable ...
Halbeegyada alaabta Qaybta Nooca Gawaarida ...
CIAAR 2020 Live Bandhiga Live】
Bishii Noofambar 12, 2020, Bandhiggii 18aad ee Caalamiga ah ee Hawada Baabuurta ee Shanghai iyo Bandhigga Farsamada Qaboojiyaha ayaa si weyn u furmay. Iyada oo horumarka degdegga ah ee warshadaha baabuurta ee Shiinaha, warshadaha qaboojiyaha guur -guura ee Shiinaha ayaa muujinaya isbeddel horumarineed oo deg -deg ah ...